लगानी बोर्डको सिईओमा सुशील भट्ट नियुक्त - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं : लगानी बोर्डको सिईओमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरिएको छ । सोमबार अपरान्ह बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भट्टलाई आगामी ४ वर्षका लागि लगानी बोर्डको सिईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका भट्टले इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन तथा योजनाको क्षेत्रमा शिक्षा तथा अनुभव बटुलेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस लगानी बोर्डमा भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश
उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रको अनुभवदेखि योजना आयोगको पनि अनुभव छ । लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्तिको प्रस्ताव अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरिए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वको सिफारिस समितिले रामकृष्ण खतिवडा, सुशील भट्ट र डा. सरोज कोइरालाको नाम मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस १ खर्ब ८५ अर्ब बढीका ७ परियोजना स्वीकृत
ट्याग्स: लगानी बोर्ड, सुशील भट्ट